I-Ceramic Insulator Ehlanganiswe Nickle Plating China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Vula i-Ceramic Component > I-Ceramic Insulator Ehlanganiswe Nickle Plating
I-metallization ye-aluminium oxide ceramics (min. 94.4% i-alumina) yenziwa inqubo ye-molybdenum-manganese nge-hydrogen ne-nitrogen yehlisa isimo ngaphansi kuka-1250 ℃ ~ 1450 ℃ . Ngemuva kokunqotshwa, i-metallic coating izokunamathela emzimbeni wesisekelo se-ceramic, izakhiwo ezijwayelekile zenziwe nge-tungsten kanye no-Mo / Mn. Ukuze kuthuthukiswe ukuthambisa kwamanzi enqubo yokukhwela, ukugqoka kwensimbi kuyadingeka ngokulandela ungqimba lwe-metallisation, njenge-nickle, i-golden plating.
I-metallized ceramics ingasiza ekufezeni i-ceramic kwensimbi, i-ceramic ku-ceramic yokujoyina isicelo ku-electronic, electrical, high-vacuum technology.
Siyakwazi ukukhiqiza ukuhlukahluka okuhlukahlukene okuvela esayizi encane kuya kwesayizi enkulu. Ngokusekelwe emgqeni wethu wokukhiqiza olunzulu kusukela ekutheni kufakwe ukwesekwa kwe-metallization nokulinganisa imishini yokuhlola endlini , sinenzuzo enkulu ekulawulweni kwekhwalithi kanye nezindleko. Yingakho senza lula kakhulu ukunikela nge-batch encane kakhulu ngesikhathi esifushane sokuhola.
● Ukwanda okushisa okuphansi ● Ukuphikisana nokuqothula ngaphandle kokugqwala ● Min. ukumelana kagesi kanye nokuqina kwe-vacuum
Xoxa nge-ceramics zensimbi
Ukuphawula: Sinikeza ububanzi obuningi bobuciko be-ceramics, okufaka i-substrate yensimbi yensimbi, indandatho ye-ceramic yensimbi, ithini le-ceramic yensimbi nezinsimbi ezihlukahlukene ze-ceramic component.
I-alumina ye-industrial alumina tubir
I-Ceramic Insulator ene-Nickle Plating
I-Ceramic Insulator ye-Spark Plugs
I-Alumina Ceramic Circle ne-Nickle Plating